Manchester United oo Soo Gashay Kaalinta Sedaxaad ee Horyaalka Ingiriiska “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Manchester United oo Soo Gashay Kaalinta Sedaxaad ee Horyaalka Ingiriiska “SAWIRRO”
Kooxda Southampton ayaa waxaa garoonkeeda ST Mary 1-2 uga badiyay kooxda Manchester United.
Tababaraha kooxda Manchester United Louis van Gaal iyo tababaraha kooxda Southampton Ronald Koeman oo labaduba u dhashay dalka Holland ayaa is gacan qaaday ka hor inta aysan ciyaarta bilaaban.
Kooxda Manchester United ayaa soo gashay kaalinta sedaxaad ee horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga.
Kooxda Manchester United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 12-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Robin van Persie,isagoo ka faa’ideysatay qalad uu sameeyay ciyaaryahan Jose Fonte oo daafaca uga ciyaara kooxda Southampton.
Kooxda Manchester United ayaa waxaa qeybtii hore ee ciyaarta ka dhaawacmay ciyaaryahan Chris Smalling,waxaana lagu bedelay ciyaaryahan Jonny Evans.
Ciyaaryahan Graziano Pelle ayaa daqiiqadii 31-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Pelle ayaa 592-daqiiqo wax gool ah aan ka dhalin horyaalka ingiriiska.
Tababaraha kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa bedel labaad sameeyay qeybtii hore ee ciyaarta,isagoo ciyaaryahan Patrick McNair oo daafaca ka ciyaara ku bedelay ciyaaryahan Ander Herrera oo khadka dhexe ka ciyaara.
Ciyaaryahan Robin van Persie ayaa daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta goolka labaad ee guusha u dhaliyay kooxda Manchester United.
Kooxda Manchester United ayaa kulankii shanaad oo isku xiga badisay horyaalka ingiriiska.
Kooxda Southampton ayaa laga badiyay kulankii sedaxaad oo isku xiga,waxaana horey uga soo badiyay kooxaha Manchester City iyo Arsenal.
Kooxda Manchester United ayaa kaalinta sedaxaad ka soo gashay horyaalka ingiriiska,waxana ay leedahay 28-dhibcood,halka kooxda Southampton ay u dhaadhacday kaalinta shanaad ee horyaalka,iyadoo leh 27-dhibcood.
Isku Aadka Wareega Sedexaad Koobka FA Cup-ka oo Caawo Lagu Dhawaaqay